Biriiga Disc - Shanghai KTG Auto Technology Co., Ltd.
Waa maxay shaqada biriiga saxanku?
Shaqada eebiriiga discBaabuurka waa in la xakameeyo xawaaraha baabuurka si uu u ordo una istaago hadba sida uu rabo darawalka.Bareegyada saxanka ayaa ka dhigi doona darawalka mid ka badbaado xakameynta baabuurka.
Baabuurta badankoodu waxay isticmaali jireen nidaamka bireega ee durbaanka ama bareegyada durbaanka, laakiin hadda baabuur badan ayaa lagu nashqadeeyay biriiga saxanka.Bireega waxaa si aad ah loogu isticmaalay noocyada kala duwan ee baabuurta, ha ahaato xagga hore iyo xagga dambe ee baabuurka.
Soosaarayaasha baabuurta ayaa si badheedh ah u bedelay nidaamka biriiga oo ay ku beddeleen biriiga sababtoo ah way ka badbaadsan yihiin oo waxay ka dhigi karaan baabuurka mid deggan, xitaa marka lagu isticmaalo xawaare sare.Habka joojinta baabuurka ayaa aad ugu wanagsan marka la isticmaalayo biriiga saxanka marka loo eego durbaanka ama barriga.
Si aad u joojiso baabuurka, dabcan, uma baahnid masaafo dheer sida labajibbaaran ahaan, iyo adiga oo isticmaalaya biriiga saxanka ah, dhammaan lugaha baabuurka ayaa si degdeg ah u istaagi kara.Si kale haddii loo dhigo, biriiga saxanku waxay soo gaabin kartaa fogaanta biriiga.Biriiga saxanka, badbaadada darawaladu waxay ahaan doontaa mid badbaado leh oo gaadhiga dhexdiisa ah.
Isticmaalka baabuur isticmaalay biriiga saxanka, waxaad noqon doontaa mid deggan oo ammaan badan.
Waa maxay Caliper-ka Brake?
Caleemaha Birigga ee Disk-gadoor muhiim ah ka ciyaar kartida aad u dejin karto ama ku joojin karto baabuurkaaga.Caliper kastaa wuxuu u shaqeeyaa isagoo cadaadis saaraya suufka biriiga marka aad hoos ugu riixdo badadkaaga.Tani waxay ku qasbaysaa suufka ka soo horjeeda saxanka.Tani waxay markaa abuurtaa iska caabin heer sare ah oo loo baahan yahay si loo yareeyo taayirradaada.Caleemaha bireega waxay u muuqdaan inay xirtaan waqti ka dib isticmaalka guud.Qalab tayo hoose leh ayaa xiran doona si ka dhaqso badan sida caadiga ah.Calaamadaha calipers-ga gashanaa waxa ka mid ah dhawaaqyo xiiqsan iyo dareen gariir marka la jebinayo.Halka nooc kasta oo ka mid ah caliper bireega uu qabto shaqo isku mid ah, ma aha kulli isku mid.
Calipers-ka bireega ayaa sameeya dhaq-dhaqaaq farsamo si ay ugu xiraan dahaarka biriiga ee saxanka.Calipers sidoo kale waxaa badanaa loogu yeeraa bireega suufka ah iyo biriiga piston-ka.
Xakamaynta bireega waxay ku shaqayn doontaa iyadoo la isticmaalayo cadaadiska haydarooliga ee ka yimaada isbeddelka cadaadiska dareeraha biriiga ee ka soo gala tuubada biriiga ama fiilada.Waxaad u baahan tahay inaad ogaato ugu yaraan laba nooc oo ah calipers-ka, kuwaas oo sabeynaya iyo calipers-ka go'an.
Sabbaynaysa Caliper waa mid ka mid ah caliper-yaasha booskoodu ku yaalo qaybta caliper taageerada bireega.Nooca caliper ayaa hadhow u wareegi doona bidix ama midig.Calipers sabaynaya, biistoonka biriiga waxa uu diyaar u yahay hal dhinac oo kaliya.Marka pistonku dhaqaaqo, baabuurka ayaa riixaya saxanka saxanka.Dhinaca kale ayaa ku dhejin doona dahaarka biriiga ee ku xiga.
Qalab go'an waa caliper kaas oo booskiisu uu ku dhex milmay caliper taageerada biriiga tanina waxay ilaalinaysaa caliperka waxayna ka shaqayn doontaa sidii loo xakamayn lahaa suufka biriiga, kaas oo ah bistoonka biriiga oo kaliya.
Qaybaha ugu muhiimsan ee Brake Caliper
Xakamaynta bireega ayaa ka kooban qaybo badan oo dhamaantood muhiim u ah hawlgalka waxtarka leh ee nidaamka biriiga.Qaybahaan waxaa ka mid ah qalabka wax lagu dhejiyo, biinanka slide, biinanka qufulka, kabaha boodhka, bireega dhejinta bareegyada, suufka biriiga iyo shaambada, biriiga oo leh boot boodh iyo shaabad
Biinankani waa la subkay oo u oggolaanaya in si habboon loo toosiyo caliper-ka rotor-ka bareegga oo weli u oggolaanaya dhaqdhaqaaqa loo baahan yahay wadista caadiga ah.
Xirmooyinka dhejinta lagama saari karo cutubka saxanka ee baabuurka sababtoo ah bareegga caliperka waxaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo caliper, kaas oo ku hayn doona caliper meesha ma dhaqaaqi doono.
Barreega piston-ka waxa la dhigayaa gudaha c aliper, oo u qaabaysan sida tuubo leh cidhifka jeexdin.Bareegga piston wuxuu u shaqeeyaa inuu riixo ama ku riixo dahaarka biriiga ee saxanka si wareegtada taayirka hoos loo dhigo ama loo joojiyo.
Shaabada biistoonku waa qayb ka mid ah bistoonada oo ka samaysan dareeraha biriiga, sidaa awgeed waxa ay leedahay sifooyinka kulaylka.Shaabada piston waxay u shaqeysaa si ay uga hortagto dareeraha dareeraha ee qulqulaya marka kabaalka biriiga la riixo.Shaabadda biistoonka ayaa kaa caawin karta in ay gadaal iyo gadaal u soo jiid biistaanka inta lagu jiro habka bareegga.
Bclip korka qaada
Muuqaallada waxaa loogu talagalay inay suufka ka fogeeyaan rotor-ka.Tani waxay ilaalin kartaa qaboojiyaha, yaraynta buuqa waxayna kordhin kartaa nolosha suufka.Muuqaallada waxay ku habboon yihiin suufka iyo rotor-ka waxayna ka riixayaan suufka rotor-ka.
Xirmada kabaha boodhka waxay ka samaysan tahay walxo dabacsan waxayna leedahay dhamaadka kowaad, kaas oo ku lug leh cidhifka bannaanka ee dhululubada.Xirmada kabaha boodhka ayaa la bixiyaa si looga hortago in biyaha, wasakhda, iyo wasakhda kale ay soo galaan meesha bannaan ee u dhaxaysa dhululubada iyo bistoonka.
Bareegga Baarkinka Korontada (EPB)
Bareegga Baarkinka Korontada(EPB) waa caliper leh mato dheerad ah (motoor caliper) kaas oo ku shaqeeya barriga baarkinka.Habka EPB si elektaroonik ah ayaa loo kontaroolaa wuxuuna ka kooban yahay furaha EPB, caliper EPB, iyo unugga kantaroolka elegtarooniga ah (ECU).
Bareegga baarkinka korantada ama EPB waa nooc horumarsan oo ah bareegga baarkinka caadiga ah ama gacanta.Mararka qaarkood, dadku waxay sidoo kale nidaamkan u yaqaaniin 'Breega Baarkinka Electroniga ah'.Farsamo ahaan nidaamkani waa qayb-hoosaad ka mid ah nidaamka 'Brake by Wire'.
Shaqada ugu weyn ee bareegyada baarkinka waa in laga fogaado dhaqdhaqaaqa gaariga marka la dhigto.Intaa waxaa dheer, biriigani waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan ka fogaanshaha dhaqdhaqaaqa gadaal ee baabuurka kaas oo dib u bilaabaya inuu ku socdo jiirada.Guud ahaan, bareegyada baarkinku waxay ku shaqeeyaan kaliya taayirrada danbe ee baabuurka.
Waa maxay Baraagaha Baarkinka?
Thenidaamka baarkinka korontada (EPB).waxa loo nashqadeeyay nooc ka mid ah nidaamka bireega-siligga elektiroonigga ah, kaas oo habka baarkinka gacanta ee caadiga ah lagu beddelay qalab-yaqaan si uu u dhaliyo xoog isku-qabsiga si uu u jebiyo baabuurka.Waa nidaamka "motor-on-caliper" kaas oo isku xira actuator ee caliper ku rakiban taayir danbe oo si toos ah u shaqeeya Caliper
fiilada baarkinka goonida ah.Hawl-wadeennada biriiga waa aaladaha u beddela xoogga hawada isku-buufiska ah ee ku dhex jira baabuurka ama kaydka hawada trailer-ka oo u beddela xoog makaanik ah, kaas oo dhaqaajiya biriiga.“Hawadaasi waxa ay dhex martaa hawl-wadeenka, iyada oo kicinaysa waalka relay-ga ah kaas oo cadaadiska hawada u beddelaya xoog bareegga jirka ah.Qalabka bireegga ee baarkinka waxaa sidoo kale loo yaqaan mashiinka baarkinka ee korontada ku shaqeeya.
Sidee buu u shaqeeyaa biriiga Baarkinka Korontada?
Nidaamka waxaa gacanta ku haya qaybta kontoroolka baarkinka ee elegtarooniga ah.Marka calaamaduhu yimaaddo, matoorka korantada ee shaqaynayaa wuu wareegayaa, dhaqdhaqaaqa wareegtada waxa lagu kala qaadaa habka gear suunkaQalabkan qalabka (sanduuqa gearbox) waxa uu yareeyaa xawaaraha wareega waxana uu u rogaa dhaqdhaqaaqa wareega in uu riixo, isaga oo biista biriiga ku riixaya suufka iyo biriiga saxannada.
Marka bareegga iyo piston-pad ay ku nastaan ​​saxanka, maadaama mashiinka korantada uu soo jiidi doono wax badan oo hadda jira, kororkan hadda jira ayaa la cabbiraa, xilligan xaadirka ah waa la gooyaa oo habka bareegga waa la dhammeeyaa.Haddii biriiga korantada la rabo in la furo, pin-ka hore u riixaya piston-ka ayaa dib loo soo celinayaa iyada oo samaynaysa wareeg kale oo biriiga waa la sii daayaa.
Kordhinta Cadaadiska Pedaalka Marka lagu jiro xaaladaha caadiga ah, badhkaaga bireega waa inuu u shaqeeyaa si habsami leh iyada oo aan loo baahnayn xoog badan si uu u niyad jabiyo badhka.Marka uu hawl-wadeenku bilaabo inuu fashilmo, waxa laga yaabaa inaad dareento in baalshu ay adag tahay in la cadaadiyo oo ay u muuqato inay u baahan tahay xoog badan oo si buuxda u niyad jabsan.
Caliper go'an CalipersBeenka Teal Jak Brake Caliper Caliper Saab Caliper Semi Loaded Saxanadaha biriiga iyo Qiimaha Calipers